Ogaden News Agency (ONA) – Taliyeyaashii Xabsiyada Gumaysiga Itoobiya oo Xilalkii Laga Xayuubiyay.
Taliyeyaashii Xabsiyada Gumaysiga Itoobiya oo Xilalkii Laga Xayuubiyay.
Wararka nagasoo gaadhaya magaalada Addiss Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in dhamaan madaxdii xabsiyada kala duwan ee heer Federal xilalkii laga qaaday.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Gumaysiga Itoobiya Behanu Tsegaye, ayaa xilalkii ka xayuubiyay madaxda xabsiyada Itoobiyaa una magaacabay kuwa cusub. Xil ka qaadista ayay ku macneeyeen gabood fallo ka dhacay xabsiyada.
Gumaysiga Itoobiya ayaa saraakiisha cusub ee ay magacaabeen uga digay inay wadadii kuwii hore maraan. Sidookale xeer ilaaliyaha guud ee taliska Itoobiya ayaa sheegay in saraakiisha xilka laga qaaday baadhitaan lagu samayn doono cadaaladana la horkeeni doono waa siduu hadalka u dhigaye.
Gumaysiga itoobiya ayaa kamid ah wadama tacadiga ugu badan maxaabiista loogu gaysto aad kana loo ciqaabo dadka sida xun xabsiyada Gumaysiga Itoobiya loogu ciqaabo waxaa kamid ah shacabka Soomaalida Ogadeniya oo ilaa maanta kumanaan kamid ahi xabsiyada kujiraan maxkamad la’aan.